Uhambo Olukhulu lwaseWashington DC
Usuku Olugcwele I-Washington DC ne-Mount Vernon Tour
Uhambo Olukhulu lwaseWashington DC nase-Arlington Cemetery
I-Alexandria & Mount Vernon Tour
I-Mount Vernon Tour + Washington DC Night Tour
Ukuvakasha kwangasese okwenziwe ngezifiso kwe-DC
Uhambo Lwezemfundo Lwabafundi
I-Virtual Online Tours
Amabhasi nezimoto ezithengiswayo
Qasha I-DC Tour Guide
Iba I-DC Tour Guide $100 ngeviki
Ukubuka indawo kwe-Washington DC Tours
Siyakwamukela ku-Zohery Tours - Washington DC Tours
I-Zohery Tours ingenye yezinkampani ezihamba phambili ezihlinzeka ngohambo lwaseWashington DC. Sekunebhizinisi cishe iminyaka engama-30 okujabulisa izinkulungwane zezivakashi ezivakashela kuwo wonke amagumbi omhlaba. I-DC yidolobha eliyingqayizivele eliveza okwedlule kwaleli zwe nazo zonke izikhumbuzo zalo ezinomlando wazo.
Nge-Zohery Tours uthola okuhlangenwe nakho kokuvakasha kokubuka indawo kwe-DC. Sikubonisa ngaphezu kwezakhiwo nezikhumbuzo zenhloko-dolobha yesizwe. Uqala uhambo lomlando lapho uthola khona lapho abenzi bomthetho nabanyakazayo bedolobha benza abakwenzayo. Lapho imali yakho iphrintwa khona. Lapho kukhonze khona uMengameli nezinye izicukuthwane. Lapho ama-VIP adla khona ukudla kwawo kwasemini, noma agijime, noma azihambele ngekhefu lasekuseni.
Ezinye zezimpawu zomhlaba ezinhle ozozibona ohambweni lwethu lwe-dc yilezi: I-White House, i-US Capitol, i-Jefferson Memorial, i-Lincoln Memorial, i-World War II Memorial, i-Martin Luther King Memorial, i-Union Station nezinye eziningi...
Ukubhuka ukuvakasha nathi kuzoba isango lakho lokuya ohambweni olwedlule futhi ubuyele esikhathini samanje. Uhambo lwethu lulandiswa ngomhlahlandlela obukhoma ozokutshela izindaba ezingemuva kwazo zonke izimpawu zedolobha. Ngokuningi ongakuhlola nesikhathi esincane, sikuklamele amaphakheji okuvakasha azofaneleka abaningi. Sinohambo losuku - I-Grand Tour yase-Washington, DC - kanye nokuvakasha kwakusihlwa - i-Washington After Dark. Futhi kulabo abangathanda ukushiya amathrekhi ashaywe, sinesevisi yokuvakasha yangasese ezohlelwa ngokwezidingo zakho nokuncamelayo.
Ngena emkhunjini futhi uzonikezwa uhambo losuku lwezemfundo lwase-DC, uhlobo lohambo izinkumbulo ezinhle ezenziwa ngalo.
kusukela ku-400 block New Jersey Avenue, ekhoneni lika-D street NW Washington DC 20001